တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သတ်ပုံများနှင့် ကျမ
အမရေးလိုက်တော့မှပဲ.. ပိုပြည့်စုံသွားတယ်.. ကျနော်လဲ အမပြောသလိုပဲဗျ.. သူများအမှားတွေဆို သိပ်မြင်တတ်တာ... ဟဲဟဲ
10/28/2006 3:09 PM
သိပြီးအကျွှမ်းတဝင်၇ှိတဲ့သူတွေကပြောပြမှအမှန်ဆိုတာ သိမှာပေါ့ ။
ဒါကြောင့် ကျမပြောတာလေ .. အမှားတွေ့ရင် မသိကျိုးကျွန်နေတတ်သွားတာဟာ တကယ်တော့ တာဝန်မဲ့သလိုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လဲ ဆရာကြီးလုပ်တယ် ထင်ခံရမှာတော့ မလိုလားဘူးရှင့်။
မင်းသားလေး>>> ၇ & ရ မှား နေတယ် :)
10/29/2006 3:29 AM
Magnetic field ,
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော်မှားနေတယ်။ ”ရ”ကိုရှာတာမတွေ့လို့အလွယ်လိုက်ပြီး “၇“လို့ရေးလိုက်မိပါတယ်။
Thanks for your post Ma May . I always do wrong spelling. Please write more of that kinds of post.We really need it.
10/29/2006 2:57 PM
အမှားမြင်သူရှိမှ အမှန်ပြင်လို့ရမှာမို့ သိရင်ပြောပြပါ။ တွေ့ရင်ပြင်ပေးပါ။ ဒီအတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာ။
10/30/2006 11:12 AM
စာလုံးပေါင်းကို အမှားနည်းနိုင် သလောက် နည်းအောင် ကြိုးစားပေမယ့်လည်း တချို့စာလုံးတွေကို မှန်လား မှားလား မခွဲခြားတတ်တော့ဘူး။ မမေလို လူမျိုးရှိမှ ဖြစ်မှာ။
ဟုတ်တယ်မမေရေ ညလေးဆို ကွန်ပျူတာကို စာရိုက်တာတွေတအားများလာလို့လားမသိဘူး တစ်ခါတစ်ခါမှာ သူများတွေရိုက်ထားတာများ မှားနေတာတွေ့ရင် အရမ်းပြောချင်တာ၊ ကိုယ်လဲ မမှားအောင် ဂရုစိုက်ရိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ခုတောင် “ရိုက်” ဆိုတဲ့ ရကောက်ကို အတိုနေရာမှာတော့ ညလေး အမြဲတန်း အရှည်ပဲသုံးတယ် ဟီးးးး လှလို့ အတိုကြီးမကြိုက်လို့။ ပြီးတော့ အဖြတ်အတောက်လဲ လိုသေးတယ်။ တစ်ချို့တွေစာဖြတ်ထားတဲ့နေရာမမှန်တဲ့အတွက် ဖတ်ရတဲ့သူတွေ အဆင်မပြေဖြစ်ကြရသေးတယ်။ “မအားရဲ့လား” နဲ့ “မ အားရဲ့လား” ဘယ်တစ်ခု ပိုအဆင်ပြေလဲ? (ဆရာကြီးစတိုင်လ်) :P
မမေ စာပြင်ချင်တယ် ပေးဖတ်စရာတွေရှိရင် ညလေးကို အလုပ်ခန့်နော် အတွေးမမှားနဲ့ တကယ်တော်တာ ဟိ...
1/21/2007 5:56 AM